Farmaajo oo labo bil sifo sharci darro ah ku jooga Villa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo labo bil sifo sharci darro ah ku jooga Villa Soomaaliya
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamd Cabdullaahi Farmaajo, ayay maanta u buuxsatay muddo labo bil ah uu sifo sharci darro ah ku joogo Madaxtooyada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, ayay maanta u buuxsantay, muddo labo bil ah, tan iyo markii ay dhamaatay maddadii dastuuriga ahayd ee xil heyntiisa, 8 Febaraayo 2021.
Lixdan cisho oo aan sharciga dalka u yaalla ku qorneyn, heshiisna lagu ahayn, ayuu Farmaajo ku fidhiyaa kursiga Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu ku fashilmay inuu hir-galiyo is fahan dalka loogu dareeriyo doorasho la isla ogol yahay.
Mucaaradka oo ay ugu tun weynyihiin, Golaha Midowga Murashixinta iyo Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaan Farmaajo u aqoon saneyn Madaxweyne, maadaama waqtigiisii sharciga ahaa dhamaaday.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa dhowr jeer diiday wada hadallo xal lagu gari karay, wuxuuna ugu danbeyn ka baxay shirkii wada tashiga ee looga arrin sanayay ajandaha, shir madaxeedka, kaas oo burburay Arbacadi.
Sida ay saadaalinayaa khubarada siyaasadda Soomaalida, sida weynna u fahansan hab dhaqanka Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday, wuxuu isku dayi doonaa muddo kordhin aan sharci ahayn, taas oo dalka u horseedi karto marxalad aan la saadaalin karin.